मंगलबार, असार २१, २०७९ ०९:४१:४९ युनिकोड
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड हराएमा यसो गर्नुहोस् बुधबार, माघ ५, २०७८
के हो मस्तिष्काघात ? यसका लक्षण, कसलाई र कसरी हुन्छ मस्तिष्काघात? जानी राखौ ! बुधबार, मंसिर २९, २०७८
विज्ञान भन्छः अन्डा शाकाहारी नै हो शनिबार, कात्तिक १३, २०७८
आज दर खाने दिन : यसरी बनाउनुहोस् मीठो दर हिन्दू नारीहरुको महत्वपूर्ण चाड हरितालिका तीजको आजबाट सुरु भएको छ । तीजको पहिलो दिन आज दर खाने प्रचलन रहेको छ । भोलि व्रत भएकोले दिउँसोभरि नाचगान गर्दै नारीहरुले पीडा पोख्दा चर्को घाममा उनीहरुलाई समस्या नहोस् भनेर दर खाने प्रचलन रहेको छ । बुधबार, भदौ २३, २०७८
के हो स्कर्भी? यसको कारण, तत्वहरु, लक्षणहरु र उपचार बिधि लामो समय देखि भिटामिनसीको गम्भीर कमीका कारण हुने समस्यालाई स्कर्भी (Scurvy) भनिन्छ । स्कर्भीका कारण रक्ताल्पता, अक्षमता, थकान तथा कमजोरीको समस्या, हातखुट्टा दुख्ने समस्या, रक्तस्रावको समस्या, शरीर सुन्निने समस्या, घाऊ चोटपटक चाँडो निकोनहुने समस्या, गिँजामा घाऊहुने समस्या तथा दाँतै झर्ने समस्या जस्ता अनेक समस्या देखा पर्न सक्छन् । बुधबार, भदौ २३, २०७८
जानी राखौ! लसुन खानुका १५ फाइदा र ५ बेफाइदा लसुनमा औषधीय गुण हुन्छ । त्यसैले यसलाई घरायासी औषधिको रूपमा प्रयोग समेत गर्ने गरिएको छ । आयुर्वेदमा लसुनलाई जवान बनाइराख्ने औषधिको रूपमा लिइन्छ र जोर्नीको दुखाई कम गर्ने औषधिको रूपमा पनि लसुनलाई नै लिइन्छ । लसुन सेवन गर्दा सरीरमा भिटामिन ए, बी तथा सी का साथै आयोडिन, आइरन, पोटासियम, क्याल्सियम तथा म्याग्नेसियम जस्ता खनिज तत्वहरू समेत प्राप्त हुन्छ । बुधबार, भदौ २३, २०७८
के हो एपेन्डिक्स ? यसको कारण, लक्षण र उपचार एपेन्डिसाइटिस एपेन्डिक्सको सूजन हो। एपेन्डिक्स एउटा सानो, औंला आकारको ट्यूबलर संरचना हो जुन ठूलो पेटको तल्लो पेटको दायाँपट्टि अवस्थित हुन्छ। मानव शरीरमा एपेन्डिक्सको कुनै ज्ञात प्रकार्य छैन। जब ब्याक्टेरियाबाट संक्रमित हुन्छ वा अवरोधको कारण, एपेन्डिक्सक बिस्तारै फुल्छ र भरिन्छ। यदि समयमै उपचार नगराएमा एपेन्डिक्सले संक्रामक सामग्रीहरू पेट र रगतमा पनि फैलाउन सक्छ। तसर्थ, एपेन्डिसाइटिस बिरामीले बिग्रनु अघि आपतकालिन हेरविचार गर्नु पर्छ। मंगलबार, भदौ २२, २०७८
यी हुन् मृगौलाका बिरामीले खान हुने तथा नहुने कुरा मिर्गौला रोगमा औषधिका साथै खानाको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरत छ । यो रोगमा पनि खानाको व्यवस्थापन गर्दा व्यक्तिगत अवस्था, उचाई, तौल, लिंग, दैनिक काम, रोगको अवस्था, खाने वानी आदिलाई ध्यान दिनुपर्छ । बुधबार, भदौ १६, २०७८
किन खाने क्वाँटी ? यस्ता छन् १२ फाईदा आज जनै पूर्णिमा । यस दिनको विशेष खान्की हो, क्वाँटी । त्यसो त हरेकजसो पर्वको आ–आफ्नै विशेष परिकार हुने गर्छ । जस्तो तिहारमा सेलरोटी, दशैंमा मासु, माघे संक्रान्तिमा कन्दमुल, असार पन्ध्रमा दही चिउरा । झ्ट्ट हेर्दा लाग्छ, यो खाने संस्कृतिको आधुनिक जीवनसँग कुनै साइनो छैन । यो त केवल आडम्बर हो । पुरातन संस्कार हो । परम्परा धान्नका लागि मात्र यसो विधि पुर्‍याउने हो । आइतबार, भदौ ६, २०७८
आज क्‍वाँटी खाने पर्व, यस्तो छ स्वादिष्ट क्वाँटी बनाउने तरिका जनैपूर्णिमा अर्थात रक्षा बन्धन देशभर मनाइँदै छ । नेवार समुदायले पनि आज गुँपुन्ही पर्व धुमधामका साथ मनाउँदैछन् । आजकाे दिन नेवार समुदायले कम्तीमा विभिन्न प्रकारका नौ थरी गेडागुडीको मिश्रण क्वाँटी खाने गरेका छन् । यही प्रचलन नेवार समुदायबाट बिस्तार भएर अन्य समुदायले पनि आजको दिन क्वाँटी खाने प्रचलन चलेको हो । आइतबार, भदौ ६, २०७८
थाहा पाईराखौ , मुला खानुका मुख्य १० चामत्कारिक फाईदाहरु बेमौसमी तरकारीको उत्पादन शुरु भएसंगै अहिले बजारमा १२ महिना मुला पाइन्छ । मुलाले भोजन पचाउँने भएकाले आयुर्वेदले यसलाई पाचक समेत भनेको छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई सुचारु राख्दा अनेकौं रोगका कीटाणुलाई शरीर बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ । शुक्रबार, साउन २९, २०७८
शरीरमा भिटामिन डीको कमी हुँदा देखिने ५ संकेत यस्ता छन् अन्य पोषण तत्व झै शरीरमा भिटामिन डीको पर्याप्ता हुन जरुरी हुन्छ। सूर्यको प्रकाश भिटामिन डीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। शरिरको प्रत्यक कोषमा भिटामिन डी रिसेप्टर हुन्छ। जब शरिरको कोषमा सूर्यको प्रकाश पर्छ तब कोलस्टोरको मद्धतमा कोषले भिटामिन डी निर्माण गर्छ। भिटामिन डी हाड, दाँत र मसल्स स्वस्थ राख्न भिटामिट डी चाहिन्छ। तापनि भिटामिन डीको परिपूर्ति चौर्तफी वेवास्ता गरिदै आएको छ। र यसैकारण विश्वभरका १० अर्ब भन्दा बढी जनसङ्ख्या भिटामिन डीको कमीको शिकार भएका छन्। बिहीबार, साउन १४, २०७८
यस कारण दोहोर्‍याएर यौन सम्बन्ध राख्न मन लाग्छ मंगलबार, साउन १२, २०७८
ग्याष्ट्रिक के कारणले हुन्छ ? यसको लक्षणहरु,कारण र व्यवस्थापन गर्ने उपाय हामीले केही खानेकुरा खाँदा खाना नली हुँदै आन्द्राको माथिल्लो भागमा पुग्छ, जसलाई आमाशय भन्छौं । आमाशयको विशेषण शब्द चाहिँ ग्यास्ट्रिक हो । यो एउटा रोग होइन्, यो शब्द विशेषण हो । तर, हाम्रोमा भने आमाशयमा घाउँ भयो, सुनियो वा रातो भयो भने ग्याष्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । यसलाई मेडिकल भाषामा ‘ग्यास्ट्राइटिस’ भनिन्छ । यसलाई नै आम जिब्रोमा ग्याष्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । बिहीबार, असार २४, २०७८
मुटु रोगका यी मुख्य १२ प्रमुख लक्षणहरू थाहा पाउनुहोस! मुटुका धेरै रोगहरू हुन्छन् र प्रत्येक रोगका आफ्नै प्रकारका लक्षणहरू पनि हुन्छन् । मुटुरोगका अनगिन्ती लक्षणहरूमध्ये सबैले थाहा पाइराख्नुपर्ने जम्मा १२ वटा प्रमुख लक्षणहरू छन् । समयमै यी लक्षणहरु थाह पाई उपचार गर्न सकेको खण्डमा ठूलो दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ । बिहीबार, असार २४, २०७८
के हो डेंगु ?: डेंगुका लक्षण, संकेत र उपचार बारे जान्नैपर्ने कुरा वर्षायाममा नेपाल–भारतका तराई क्षेत्रमा महामारीकै रूपमा फैलने डेंगु प्रदूषित पानीका कारण लाग्ने रोग हो । यो रोग एडेस एजिप्टि नामक पोथी लामखुट्टेमार्फत फैलन्छ । यो लामखुट्टेले प्रायः दिउँसो मानिसलाई टोक्छ । सामान्य ज्वरो र डेंगुका कारणले आउने ज्वरोलाई त्यतिकै छुट्याउन सकिंदैन । डेंगु एक प्रकारको सरुवा रोग हो र यो रोग कुनै पनि उमेर समूहका मानिसमा देखा पर्न सक्छ । सामान्यतया यो रोगको लक्षण लामखुट्टेले टोकेको ४ देखि ७ दिनमा देखा पर्छ । सोमबार, असार २१, २०७८
वर्षायामका पानीजन्य रोगहरुबाट बच्ने १० तरिका वर्षायामको सुरुवातसँगै विभिन्न किसिमका रोगको प्रकोप बढ्छ। विशेषगरी विभिन्न खाना, पानी तथा कीटजन्य रोगहरू प्रमुख कारण हुने गर्दछन्। यस्ता रोगहरूको प्रकोप बढ्नुको पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन्। यस समयमा गर्मी तथा अरु प्रतिकूल अवस्थाका कारणले भण्डारण गरिएका बासी खानेकुरामा विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरियाको बृद्धि हुन्छ र तिनीहरूले निकालेको टक्सिनको कारण फुड पोइजनिङ हुन सक्दछ। वर्षायाम सँगै झिंगा माखाको विकास तथा संख्या बढ्न थाल्दछ। यिनीहरू विभिन्न किसिमका फोहर मलमूत्रमा बस्ने र मानिसहरुले खाना बनाउँदा, खाना खान तयार पारिएको खाना तथा पानीमा आएर बस्दा रोगका किटाणु खानामा सारिदिन्छन् र खाना तथा पानी दुषित बनाइदिन्छन्। उक्त खाना पानीको सेवनले झाडा, बान्ता, ज्वँरो, जन्डिसजन्य रोग लाग्ने गर्दछ। सोमबार, असार २१, २०७८
वर्षायाममा देखिन्छन यी १० पानीजन्य रोगहरू वर्षायामको शुरूआतसँगै पानी, खाना र कीटजन्य सरुवा रोगको जोखिम र प्रकोप अत्याधिक बढ्छ । पानीजन्य रोगहरू दूषित पानीको संसर्ग, सेवन र पानीमा हुने अनावश्यक रसायनका कारण लाग्छन् । मुसाको पिसाब धानखेतको पानीमा मिसिंदा मानिसमा लेप्टोस्पाइरोसिस रोग लाग्न सक्छ । खोला तथा दहको जमेको दूषित पानीमा पौडी खेल्दा खुला एमिबाको संक्रमण हुन्छ । पानीमा आर्सेनिकको मात्रा उच्च भएमा आर्सेनिकोसिस रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । सोमबार, असार २१, २०७८